Midoka tena toa papelika
Manga ny lanitra, nahomby ny ezaka, tena nahay ny mpitondra ankehitriny tamin’ny pakaidy nentiny niatrehana ny krizy, raha ny valan-dresaky ny filoham-pirenena omaly.
Maromaro ihany izay mpanao politika sy mpitondra fanjakana teo aloha nanambara ny mbola tsy fitsanganan’ny firenena Malagasy izay.
Misy fetra ary tsy misy natao haharitra avokoa ny zava-drehetra hary eto amin’ity tany fandalovana ity.
Izay ipoahany any irehetany
Ho tapitra anio ny fe-potoana farany ahafa-mandrotsaka ny antontan-taratasy ho an’ireo te hibata ny sezan’Anosikely.
Misy farany io a !
Asa raha mba mahara-baovao tsara ihany ny ao an-dapa ao.Efa tena miova fa tsy tahaka ny tamin’ny 2 taona lasa ny sary ankehitriny ; toa tapitra hatreto ilay kandida laharana faha 13 nampanofinofy sy manjelanjelatra be hilaza fa hanao zavatra tsy mbola vitan’ny rehetra nitantana teo alohany.
Azo ambara ho tsara rafitra sy tsara rindra, raha ny an-taratasy ary tsy azo lavina fa nisy ny ezaka lehibe sy finiavana na misy aza ny mety ho lesoka, indrindra ny famaritana ny laharam-pahamehana. Zava-dehibe na izany aza ny fanomezan-toky nataon’ny praiminisitra fa tsy hanala baraka ny tenany izy, fa izay voasoratra dia hotanterahina avokoa. Manana iraka lehibe ny fahefana mpanatanteraka miainga any amin’ny filoha, dia ny fanatanterahana ireo voasoratra ao anatin’ny PGE fa sao ho toy ilay nambara tamin’ny taona 2010 fa efa any anaty sambo ny Tramway indray, kanefa 10 taona aty aoriana tsy mbola tonga fa rendrika angamba. Ilay IEM rahateo na ny anarany aza toa efa niova tahaka ilay anaran’ny antoko na vondron’antoko. Nambara tany amin’ny fananganana ny governemanta ankehitriny, taorian’ny fianianan’ny filoha 7 volana lasa izay mantsy fa hisy ny tombana isaky ny enim-bolana, saingy tsy fantatra mazava taty aoriana hoe: inona no vita ? Ny tena hita ho mandeha be sy mahasomokotra hatreto rahateo dia toy ny fanenjehana ny mpanohitra na fisakanana olona iray tsy hahazo ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra. Ho avy ny olobe ara-panahy iray, dia mety ho any indray aloha no hanarinariana dia ny rehetra, toy ny tamin’ny fahombiazan’ny Barea. Mbola ketrika iray hafa ihany koa ny kajikajy amin’ny fifidianana ben’ny tanàna ahazoana ny maro an’isa. Ny resaka ady amin’ny fahantrana sy ny programan’asa kosa mbola mijanona ho antontan-kevitra anaty taratasy hatreto. Sao diso adversera na koa minia manangan’ady, dia avy eo hilaza fa nelingelenina sy nofinganin’ny hafa ka mila 5 taona manaraka indray tena hiasana e ?